पक्राउ परेका विद्यार्थी नेता रिहा – Rara Khabar
पक्राउ परेका विद्यार्थी नेता रिहा
रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ललाई निलम्बन गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पक्राउ विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । सोमबार विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले १४ जना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियाे ।
विद्यार्थीहरुले प्रशासनिक भवनको दुई वटा काउण्टरमा तोडफोड गरेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियाे । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा उपेन्द्र कोइरालाले राजनीतिको आडमा बिनाकारण रजिष्टार पदबाट डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई हटाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेस निटक विद्यार्थी र प्रध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विश्वविद्यालयको रजिष्टारमा शिक्षा संकायका डिन यामबहादुर कार्कीलाई नियक्त गरेर डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो । प्रध्यापक र विद्यार्थीहरुले नियम विपरित गरिएको निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । प्रहरीले गेटमा सुरक्षा दिएपछि विश्वविद्यालयको पठनपाठन भने सोमबारदेखी सुचारु भएको छ ।
यता, शान्तिपूर्ण रुपमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरिरहेको बेला प्रहरीले गरेको धरपकटको नेविसंघले विरोध गरेको छ । विश्वविद्यालयको हकहितका लागि आवाज उठाइरहेको बेला प्रहरी लगाएर विश्वविद्यालय प्रशासन गरेको ज्यादतीको नेविसंघ केन्द्र र सुर्खेतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तीमार्फत कडा विरोध जनाएको हाे । विद्यार्थीहरुका मागका विषयमा विश्वविद्यालयले कुठराघात गरेमा कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने चेतावानी नेविसंघको छ ।
प्रकाशित मितिः २५ मंसिर २०७५, मंगलवार ०६:१०